Mitsofoka manodidina - Torolàlana ho an'ny zava-bita | Torolàlana momba ny lalao, legiona, zava-bita, ady biby | WoW Guides | WoW Guides
Mitsikilo manodidina - Torolàlana ho an'ny zava-bita
Sofia Vigo | | Game Guide, Legiona, zava-bita, Biby miady
Salama daholo. Hitondra anao ny zava-bita hafa an'ny meta-zava-bita Havana ao amin'ny fianakaviana. Momba ny zava-bita Mitsofoka manodidina ary tsy maintsy ataontsika miaraka amina ekipa biby fiompy karazana vermin. Omano ny biby fiompinao tsara indrindra ary andao isika hankany aminy.
Amin'ity zava-bita ity, Mitsofoka manodidina , tsy maintsy mandresy tompo roa ambin'ny folo miely manerana ireo nosy tampoka isika, amin'ny dimy ambin'ny folo. Araka ny nolazaiko anao teo aloha dia homeko anao ny ady amin'ny dimy ambin'ny folo satria ny sasany amin'izy ireo dia somary sarotra. Noho izany dia hanana safidy ianao hisafidy ireo mpampianatra tadiavinao ary hamela ireo sarotra indrindra ho an'ny farany, satria amin'ny tranga sasany dia tsy ilaina ny manao azy ireo.
Fikarohana manokana momba ny biby fiompy telo monja no ho mavitrika isan'andro. Raha tsara vintana isika, ny sasany dia ampahany amin'ny zava-bita izay hataontsika.
Raha te-hanatanteraka ny ady amin'ity zava-bita ity dia tsy maintsy miantehitra amin'ny fananana tameran'ny zava-bita, miasa isika. Indray mandeha isan'andro ihany no azontsika resena azy, na dia azontsika atao ihany koa ny manova azy, satria ny zava-bita dia zaraina amin'ny kaonty. Mazava ho azy, tsy maintsy ambaratonga 110 isika ary asandratra ny lazan'ny Legion ka novahana ny iraka.
Ity zava-bita ity dia tanterahina amin'ny biby fiompy karazana critter.
6 Voankazo mahery Durian
7 Bredda Softskin
8 Grixis kely
11 Trapper Jarrun
13 Master Tamer Flummox
Ity mpampianatra ity dia hita any Dalaran ary ady sarotra izany.
Ny ekipa izay hampiasaintsika amin'ity fivoriana ity dia:
Kalalao 25 ​​ambaratonga rehetra miaraka Flank, Misitrisitra y apocalipsis
Ny haavon'ny bitro 25 miaraka amin'ny rangotra, ratra kely, Dodge y fifanosehana
Nanomboka ny ady tamin'ny kalalao izahay ary nampiasa Flank mandritra ny enina fihodinana, avy eo apocalipsis y Flank indray mandra-pahafatin'ny biby fiompy fahavalo. Raha maty alohan'ny fahenina ny biby fiompy Flank, Amin'izany fotoana izany dia hampiasainay apocalipsis.
Raha vao maty ity biby fiompy ity ary miditra ny biby fiompy fahavalo faharoa dia hamoaka ny bitro izahay. Tsy maintsy misafidy iray izay manana hafainganam-pandeha ampy isika. Hampiasa izahay Dodge, fifanosehana, rangotra, ratra kely, Dodge ary indray rangotra, ratra kely, mandra-panafoana ny biby mpifaninana.
Raha noho ny antony dia ny biby fiompintsika no maty alohan'ny hamonoantsika azy dia esorintsika ny bitro fahatelo ary hampiasaintsika Dodge y rangotra, ratra kely mandra-pahavitako miaraka aminy.
Ampidiro ny biby fiompy fahavalo fahatelo ary ampiasao Dodge raha mahay isika ary raha tsy manome dia manome Ela!. apocalipsis hiandraikitra ny famongorana ity biby fiompy farany ity.
Ity mpampianatra ity dia hita any Dalaran.
Misy sifotra haavo 25 miaraka Fikitika snot, Vovoka masirasira y mitsoraka
Kisoa silika amin'ny handevona, Baolina kalalao y Vovoka samoina
Ny haavon'ny haavo 25
Manomboka ny ady amin'ny sifotra sy ny fampiasana azy izahay Vovoka masirasira, Fikitika snot, mitsoraka y Fikitika snot mandra-pamono ny biby fiompin'ny fahavalo.
Ampidiro ity biby fiompy manaraka ity dia ampiasainay Vovoka masirasira y Fikitika snot mandra-pahafatiko azy.
Ampidiro ny biby fiompy farany an'ny fahavalo ary ampiasao Vovoka masirasira y Fikitika snot mandra-pahafatintsika. Mamoaka ny anay izahay Kisoa silika ary mampiasa izahay Vovoka samoina, handevona y Baolina kalalao, mandra-pahatapitry ny tolona. Raha misy antony hahafatesantsika eo alohan'izay dia hivoaka ny biby fiompy fahatelo izahay ary hampiasa fanafihana simba mandra-pahatapitry ny.
Frostbite Rat amin'ny Fanafihana mangingina, Bend e Miantso haizina
Misy sifotra haavo 25 miaraka mpitroka, Vovoka masirasira y mitsoraka
Mivoaka miaraka amin'ny sifotra izahay ary mampiasa Fikitika snot, Vovoka masirasira y mitsoraka. Avy eo dia manohy Fikitika snot mandra-pahafatintsika.
Manohy ny tolona amin'ny anay izahay Frostbite Rat. Raha tsy maty ny biby fiompin'ny fahavalo dia hampiasa isika Fanafihana mangingina mandra-pahafatiko azy. Raha efa maty io dia ampiasaintsika miaraka amin'ny biby fiompy fahavalo vaovao, Bend , Miantso haizina y Fanafihana mangingina mandra-pahafatintsika.
Mivoaka miaraka amin'ny sifotra sisa tavela sy nampiasainay izahay mitsoraka y mpitroka, mandra-pahatapitry ny tolona.
Ny haavon'ny bitro 25 miaraka amin'ny Alluvium, Adrenaline Rush y mihady
Fawn amin'ny Dingana, Fikajiana voajanahary y Lohapejy
Nanomboka ny ady tamin'ny bitro izahay ary nampiasa Adrenaline Rush, Alluvium, mihady, Adrenaline Rush indray ary Alluvium mandra-pamono ilay biby mpifaninana aminy.
Miditra ny biby fiompy fahavalo ary esorinay ny sipanay. Mampiasa izahay Vovoka masirasira, Fikitika snot, mitsoraka ary indray Fikitika snot mandra-pamono ilay biby mifanohitra.
Ampidiro ny biby fiompy farany ary ampiasainay Vovoka masirasira y Fikitika snot mandra-pahafatintsika.
Mamoaka ny anay izahay Fawn ary mampiasa izahay Fikajiana voajanahary, Lohapejy y Dingana.
Ity mpampianatra ity dia hita ao Azsuna.
Kalalao 25 ​​ambaratonga rehetra miaraka Flank, velona y ho be
Ny haavon'ny bitro 25 miaraka amin'ny Alluvium, Dodge y fifanosehana
Misy sifotra haavo 25 miaraka Fikitika snot, Ampinga akorandriaka y mitsoraka
Manomboka ny ady amin'ny kalalao voafidy sy ny fampiasana azy izahay ho be y Flank mandritra ny fihodinana roa mandra-pahafatiny ilay biby mpifaninana.
Ampidiro ny biby mpifaninana manaraka.
Raha mbola velona ny kalalao dia mampiasa ho be mandra-pahafatintsika ary miditra miaraka amin'ny bitro isika. Mampiasa izahay Alluvium mandritra ny fihodinana roa ary avy eo Dodge. Ampidiro ity biby fiompy manaraka ity dia ampiasainay fifanosehana mandra-pahafatintsika. Mivoaka miaraka amin'ny sifotra izahay ary mampiasa Fikitika snot mandra-pahafatiko azy.
Raha maty ny kalalao dia miditra amin'ny bitro isika ary mampiasa Dodge, fifanosehana y Alluvium mandra-pitsangan'ny maty ny biby fiompinao dia ampiasainay izany Dodge. Ampidiro ny biby fiompy manaraka dia ampiasainay fifanosehana mandra-pahafatintsika.
Miditra amin'ny sifotra izahay ary mampiasa Fikitika snot mandra-pahatapitry ny tolona.
Ity mpampianatra ity dia hita ao amin'ny Val'sharah
Sifotra ambaratonga 25 misy mpitroka, Vovoka masirasira y mitsoraka
izay verinia an'ny haavo 20 na avo kokoa
Ny haavon'ny ambaratonga 25
Manomboka ny ady amin'ny sifotra sy ny fampiasana azy izahay Vovoka masirasira, mitsoraka, mpitroka, Vovoka masirasira indray, mpitroka mandritra ny telo fihodinana, Vovoka masirasira, mitsoraka y mpitroka mandra-pamono ny biby fiompin'ny fahavalo.
Ampidiro ity biby fiompy manaraka ity dia ampiasainay Vovoka masirasira, mpitroka mandritra ny telo fihodinana indray Vovoka masirasira, mitsoraka y mpitroka mandra-pahafatiko azy.
Ampidiro ny biby fiompin'ny fahavalo farany dia namely izahay Ela!avy eo Bika matoanteny, mpitroka mandritra ny fihodinana roa, mitsoraka, Ela!, Vovoka masirasira y mpitroka mandra-pahatapitry ny tolona.
* Raha mety ho faty amin'ny antony rehetra isika dia afaka mampiasa ny biby fiompy fahatelo.
Fantatra amin'ny anarana hoe Bredda Cueroliso ary afaka mahita azy any Montealto isika. Ady sarotra izany.
Ny haavon'ny bitro 25 miaraka amin'ny rangotra, ratra kely, Dodge y mihady
Nanomboka ny ady tamin'ny bitro izahay ary nampiasa Dodge, rangotra, ratra kely mandritra ny telo fihodinana, mihady y Dodge mandra-pamono ilay biby mpifaninana aminy.
Ampidiro ity biby fiompy manaraka ity dia ampiasainay rangotra, ratra kely mandra-pahafatintsika. Niditra niaraka tamin'ny bitro faharoa izahay ary nampiasa mihady isaky ny misy ary ampiarahanay aminy rangotra, ratra kely mandra-pahafatintsika.
Miditra amin'ny sifotra izahay ary mampiasa Fikitika snot mandra-pamono ilay biby mpifaninana. Ampidiro ity biby fiompy manaraka ity dia ampiasainay mitsoraka, Ampinga akorandriaka, Fikitika snot mandritra ny telo fihodinana ary mitsoraka mandra-pahatapitry ny tolona.
Fantatra amin'ny anarana hoe Grixis Chiquipum, ity mpampianatra ity dia hita ao Montealto.
Cricket mena amin'ny Scamper, Voadona Cocoon y Touch ny natiora
squirrel amin'ny Shredder, Bend y fifanosehana
Manomboka amin'ny Cricket mena ary mampiasa izahay Voadona Cocoon, Touch ny natiora y Scamper mandritra ny fihodinana roa mandra-pahafatintsika. Nivoaka niaraka tamin'ny squirrel ary mampiasa izahay Bend, Shredder, fifanosehana y Shredder mandra-pahafatintsika.
Miditra amin'ny biby fiompy fahatelo izahay ary mampiasa fanafihana simba mandra-pahatapitra ny ady.
Ity mpampianatra ity dia hita any Stormheim ary ady sarotra amin'ny fianakavian'ireo biby fiompy ity.
Ny haavon'ny bitro 25 miaraka amin'ny Alluvium, Dodge y mihady
Manomboka amin'ny bitro voalohany sy fampiasana izahay Dodge, Alluvium mandritra ny fihodinana efatra, Dodge y Alluvium, mandra-pamono ny biby fiompin'ny fahavalo.
Ampidiro ity biby fiompy manaraka ity dia ampiasainay mihady, Alluvium mandritra ny telo fihodinana, Dodge, Alluviumindray mihady, Alluvium mandritra ny fihodinana roa, Dodge y Alluvium mandra-pamonoantsika azy.
Ampidiro ny biby fiompy farany ary ampiasainay Dodge y Alluvium mandra-pahafatintsika. Niditra niaraka tamin'ny bitro faharoa izahay ary nampiasa Dodge mitambatra azy amin'ny Alluvium. Raha maty ny bitro dia miditra amin'ny sifotra isika ary ampiasaina Vovoka masirasira, mitsoraka y Fikitika snot.
Misy sifotra haavo 25 miaraka Fikitika snot, Ampinga akorandriaka y Lohapejy
Misy bitro miaraka amin'ny rangotra, ratra kely, Dodge y mihady
Ny haavon'ny vermin 15 na avo kokoa
Manomboka amin'ny sifotra sy ny fampiasana izahay Lohapejy, Ela! mandritra ny fihodinana roa, Ampinga akorandriaka, Fikitika snot, Lohapejy ary indray Fikitika snot mandra-pamono ilay biby mpifaninana aminy.
Ampidiro ity biby fiompy manaraka ity dia ampiasainay Fikitika snot, Ampinga akorandriaka, Lohapejy y Fikitika snot mandra-pahafatintsika. Niditra niaraka tamin'ny bitro izahay ary nampiasa Dodge y rangotra, ratra kely mandra-pamono ilay biby mpifaninana aminy.
Ampidiro ny biby fiompy farany an'ny fahavalo ary ampiasao rangotra, ratra kely mandritra ny fihodinana roa, Dodge, rangotra, ratra kely, mihady, rangotra, ratra kely indray, Dodge y rangotra, ratra kely mandra-pahafatiko azy.
Manomboka amin'ny bitro sy mampiasa izahay Alluvium, fifanosehanaindray Alluvium y fifanosehana mandra-pamono ilay biby mpifaninana aminy.
Ampidiro ity biby fiompy manaraka ity dia ampiasainay Dodge, Alluvium mandritra ny fihodinana roa dia maty isika. Miditra amin'ny sifotra izahay ary mampiasa Ampinga akorandriaka, Fikitika snot ary indray Ampinga akorandriaka. Maty ny biby fiompy fahavalo ary miditra ny iray. Mampiasa izahay mitsoraka y Fikitika snot mandra-pahafatintsika.
Manohy ny tolona amin'ny verinia nofinidinay izahay ary mampiasa izay fanafihana simba rehetra hamaranana.
Manomboka amin'ny sifotra sy ny fampiasana izahay Ampinga akorandriaka y Fikitika snot mandra-pamono ilay biby mpifaninana. Ampidiro ity biby fiompy manaraka ity dia ampiasainay Fikitika snot mandra-pahafatintsika.
Niditra tamin'ny ady tamin'ilay bitro izahay ary nampiasainay mihady. Ampidiro ity biby fiompy manaraka ity dia ampiasainay Alluvium mandritra ny fihodinana roa, Dodge y mihady isaky ny misy izany, atambatra miaraka Alluvium, mandra-pahafatintsika.
Miditra amin'ny verima isika ary mampiasa fanafihana simba mandra-pamonoantsika ny biby fiompin'ny fahavalo ary hampitsahatra ny ady.
Kalalao 25 ​​ambaratonga rehetra miaraka Flank, velona y apocalipsis
misy ambaratonga bitro 25 miaraka Alluvium, Dodge y mihady
Niditra tamin'ny ady tamin'ny kalalao izahay ary nampiasa apocalipsis. Miditra miaraka amin'ny bitro izahay ka manome azy Ela!. Avy eo izahay mampiasa Dodge, Ela!, mihady y Ela! indray mandra-pahafatin'ny bitroantsika. Miditra amin'ny bitro hafa izahay ary mamely Ela! mandra- apocalipsis vonoy ny biby mpifaninana ary tanteraho ny ady.
Bitro lohataona amin'ny Alluvium, Dodge y mihady
Manomboka amin'ny sifotra sy ny fampiasana izahay Vovoka masirasira y mitsoraka. Tokony hiasa hatrany isika Vovoka masirasira ary atambaro azy mpitroka mandra-pamono ilay biby mpifaninana aminy.
Ampidiro ity biby fiompy manaraka ity dia ampiasainay Vovoka masirasira y mpitroka, mandra-pahafatintsika. Niara-niditra taminy izahay Bitro lohataona ary mampiasa izahay Dodge, Alluvium, mihady y Alluvium mandra-pahafatiko azy.
Ampidiro ny biby fiompy farany ary ampiasainay Alluvium, Dodge, Alluvium indray mandritra ny fihodinana roa, mihady, Dodge, Alluvium y Alluvium indray mandra-pahatapitry ny tolona.
Misy sifotra haavo 25 miaraka mpitroka, Ampinga akorandriaka y mitsoraka
Manomboka amin'ny sifotra sy ny fampiasana izahay mitsoraka ary mandritra ny CD dia ampiasainay mpitroka mandra-pamono ilay biby mpifaninana aminy.
Tonga ny biby fiompy manaraka ary mamoaka ny bitro izahay ary mampiasa Dodge, Alluvium mandritra ny fihodinana roa, mihady, Dodge ary indray Alluvium mandritra ny fihodinana roa mandra-pahafatiny.
Ampidiro ny biby fiompy farany ary ampiasainay Alluvium mandra-pahafatintsika. Niditra ny ady tamin'ny sifotra izahay ary nampiasaina Ampinga akorandriaka, mpitroka mandritra ny fihodinana roa ary mitsoraka.
Mirary soa indrindra amin'ny ady ary hahita anao any Azeroth.
Fankatoavana anaty rano
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: WoW Guides » Game Guide » Mitsikilo manodidina - Torolàlana ho an'ny zava-bita
Battle for Azeroth mialoha ny fividianana amidy izao
Balance Druid - Torolàlana PVE - Patch 7.3.5